TodoDLS - Obodo egwuregwu bọọlụ ọkacha mmasị gị
💵 Mkpụrụ ego
Mmmmmmmmmmmm DLS Maka PC
Nnọọ na TodoDLS! Peeji dị mkpa maka onye ọkpụkpọ ọ bụla Ngwakọta Njikọ Nrọ (DLS). Ọzọkwa, n'agbanyeghị ihe gị version nke DLS ọkacha mmasị: 2020, 2019... N'ebe a, ị ga-ahụ ụzọ ị ga-esi nweta mkpụrụ ego n'efu, ntuziaka iji meziwanye egwuregwu gị, uwe na ... ọtụtụ ihe ọzọ! N'okpuru ị nwere ihe kachasị mkpa, ma na-agụ akwụkwọ, n'ihi na mgbe nke ahụ gasịrị, e nwere ọtụtụ ntụziaka na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ! merie egwuregwu gị niile!
Otu esi egwu bọọlụ Dream League na PC
Uniform (Ngwa) maka bọọlụ Njikọ nrọ
Nweta mkpụrụ ego efu na bọọlụ Dream League
Ndị aghụghọ maka egwuregwu bọọlụ nrọ: Otu esi abụ onye ọkpụkpọ ka mma
Otu esi ewepụ Lag na Dream League Soccer
Ntuziaka ụkpụrụ ọrụ bọọlụ Njikọ nrọ
Otu esi enweta diamond efu n'ime DLS
Anyị nwere ọtụtụ uwe zuru oke, na ngwa ụlọ ha na ebe pụọ, yana logos na ọta. Ị nwere ike ịhụ ole na ole n'okpuru. pịa ebe a ịhụ uwe niile anyị nwere dị.
Uniform (Ngwa) na Akara Arsenal
Uniforms (Kits) na Logo nke Atlético de Madrid
Uniform (Ngwa) na akara nke Chelsea
Uniforms Leicester City na Logo
Uniform (Ngwa) na Logo Liverpool
Uniform (Kits) na Manchester City Logo
Uniform (Kits) na Logo nke Manchester United
Uniform (Kits) na Logo nke Real Madrid
Kedu ihe bụ Dream League Soccer?
Ọ bụrụ na enyi gị kpọrọ gị òkù ịbịa na ibe a ma ị maghị nke ọma ihe Dream League Soccer bụ maka, anyị ga-agbalị ịkọwara gị ya ngwa ngwa.
Ngwakọta Njikọ Nrọ bụ saga egwuregwu vidiyo maka ekwentị mkpanaaka (Android, iPhone na ọbụna Windows Phone) nke ụlọ ọrụ Bekee mepụtara, nke dabeere na Oxford (England), nke a maara dị ka. Egwuregwu emetụ mbụ. Ụdị ọhụrụ nke saga bụ DLS 2020, nke na-abịa na ọtụtụ mgbanwe n'ụdị egwuregwu ahụ na ụzọ isi gaa n'ihu na ya.
DLS 2020 bụ ụdị ikpeazụ nke saga
Egwuregwu a enwetala ihe karịrị nde 10 nbudata na ụlọ ahịa egwuregwu. Google Play na ndị egwuregwu bọọlụ ama ama dịka Gareth Bale, nke otu egwuregwu bọọlụ Spanish Real Madrid na Luis Suarez, nke FC Barcelona.
Site na mbipute DLS 2016, egwuregwu webatara na Ikikere FIF Pro inwe ike iji ezigbo ndị egwuregwu bọọlụ na ọnọdụ ọtụtụ mmadụ na-eche ihu ndị egwuregwu bọọlụ ndị ọzọ ihu.
Ọ bụrụ na-amasị gị na ibe a ma na-achọ ka ọhụrụ na akụkọ ọhụrụ, ị nwere ike iso anyị na Facebook ma ọ bụ Twitter. Ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla ị nwere ike iji ụdị kọntaktị dị n'elu aka nri ma ọ bụ gaa na ngalaba nkọwa n'ime isiokwu anyị ọ bụla. Daalụ nke ukwuu maka nleta TodoDLS!
TodoDLS bụ isi mmalite ozi kacha mma maka ihe niile metụtara egwuregwu vidiyo mkpanaka, Dream League Soccer. Ntuziaka kacha ọhụrụ, ndụmọdụ na ozi ebe a!